Kana iwe wakambosvitsa kudhinda kubva kune dzimwe nzvimbo dzemasiti, mukana iwe unosarudza vakuru APIs. Zvisinei, kune mamwe web scrapers paInternet iyo inogona kuita kuti basa rako rive nyore, uye semuzvigadziri kana wekugadziridza, unokwanisa kubvisa dhenda kubva munzvimbo dzakawanda sezvaunoda.
Data Scraper isiri nyore asi ine simba uye inobatsira purogiramu yekutsvaga web. Haisi chete inoparadza zvifananidzo nemagwaro asiwo inoongorora mazita nematafura kubva pamapeji imwe chete kana akawanda. Zvadaro, iyi shanduko inoshandura kana kuchengetedza dhesi yakabudiswa kumafayela eXLS uye CSV - silicon valley computer repair. Hazvina mari uye inouya nehuzhinji hwezvinhu. Zvisinei, mapurogiramu uye vashanduri vezvese vanofanira kushandisa shanduro yayo yakabhadhara inouya nehuwandu hwezvinhu uye haibviri chero coding.
2. Webwepu yakashata:
Webhusaiti yakagadzirwa ndeyekuwedzera kwe Chrome kunogona kuiswa nyore nyore neGoogle Chrome browser. Inobvumira vashandisi kugadzira sitemaps kuratidzira nzira iyo nzvimbo inofanira kuendeswa nayo uye rudzi rwe data raunoda kuparadzira. Vagadziri uye vakugadziri vanongoda kuwedzera iyi kuwedzera kune Chrome yavo uye kutanga kubvisa deta.
Kana iri nyaya yekuwedzera deta, vateereri uye mapurogiramu vanofanira kusangana nematambudziko mazhinji. Zvisinei, neScraper, basa ravo rinogona kuitwa nokukurumidza uye nyore kupfuura kare. Iyi i nyore nyore kushandisa web scraper iyo inokwanisa kubvisa dare nenzira yematafura, mifananidzo, mazita, nemagwaro. Iwe unongoda kuvhara bhatani reScrape kubva kumusoro kwarudyi menyu uye rega ichi chigadziro chiite basa rayo.
6. Kuona Zvishoma:
Visual Scraper yakanaka kune avo vanoda kutsvaga mifananidzo uye mavhidhiyo mavhidhiyo. Ndiyo mahwanda web scraper inouya neinyore-ne-click-interface uye inowanzoshandiswa kuunganidza data yakakodzera kubva paIndaneti. Iwe uchawana data chaiyo-nguva kubva pamapeji akadikanwa uye unotengesa iyo mufananidzo weXML, CSV, SQL, uye JSON.
7. Kukanganisa Hub:
Izvi zvisingabhadharwi zvinouya nezvinhu zvakawanda uye zvakakodzerwa neWindows, Linux nedzimwe nzira dzekushanda. Ichakubvumira iwe kuparadzira deta kubva kune mazana mapeji makumi mashanu ewebhu. Zvisinei, iyo premium version inogona kuparadzira mapeji e-130 000 asina kukwana.
Ichinziwo CloudScrape, Dexi.io inonyanya kushandiswa-based web scraper. Iko inobvumira vashandi kuti vape data uye vanopa zvitatu zvakasiyana zvemabhobho kuti vaite basa racho nyore nyore. Inogona kuita mabasa ane chokuita nekukamba, kuwedzera uye kudhonza piping.
Webhose.io ihurukuro iyo inopa isu asingazivikanwi server web proxy uye inoita kuti basa riitike nekukurumidza. Hazvirevi chete nzvimbo dzako asiwo nhoroondo dzekuchengetedza; zvinoreva kuti haufaniri kushushikana nekurasikirwa nemashoko anobatsira sezvachazochengetwa muChirongwa cheChirongwa.